कु,मारि’त्व गुमाउन परिपक्क उमेर कति ? – Ujyaalo Patrika
कु,मारि’त्व गुमाउन परिपक्क उमेर कति ?
किशोर अवस्थामा आउने शा,रीरिक परिवर्तन पछि धेरै किशोरकिशारीहरुमा यौ८ नप्रति आर्कषण बढ्ने गर्दछ ।
तर यौ८ नका बिषयमा सहि जानकारी नहुनाले कहिले र कुन समयमा आफुले कु८ मा’रित्व गुमाउँदा सही हुन्छ भन्ने धेरै कमलाई मात्र जानकारी हुने गर्दछ । एक सर्बेका अनुसार किशोर अवस्थामा यौ८ नका विषयमा जानकारी नै नभई करीब ४० प्रतिशत किशोरी र २६ प्रतिशत किशोरले यौ८ न सम्बन्ध राख्ने गर्दछन् ।
किशोर उमेर भनेको १३ वर्षदेखि १९ बर्षसम्मको उमेर अवधि हो । जसमा १७ देखि १९ सम्मको उमेरका बिचमा यौ८ न संबन्ध राख्नेको संख्या बढि हुने गर्दछ । तर यौ८ नपछि उनिहरु कमै उमेरमा यौ८ न सम्बन्ध स्थापित हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
किशोर अवस्थामा नै हुने यौ८ न संबन्धमा दुई पार्टनरबीचको सहमतिमा भन्दा पनि दबाबमा बढि रहने गर्दछ । अझ कतिले त कौतुहलताका कारण पनि शा,री’रीक सम्बन्ध राख्ने गर्दछन् ।
भ८ र्जि,निटी गुमाउने सही उमेर कुन हो ?
अध्ययनले देखाएअनुसार कु८ मारित्व गुमाउने सही उमेर भनेको १९ बर्ष उमेर हो । यस उमेरमा शरीरका सम्पुर्ण अंगहरु विकाश भई सकेका हुन्छन् । जसले यौ८ नका बेला तपाईलाई मा,नसिक र शा,रीरीक दुबैमा साथ दिन्छ ।
तर केहीमा भने शा,रीरीक विकाश ढिलो हुने भएकाले २० बर्षपछिको उमेरमा राखिने शा,रीरिक स८ म्पर्क एकदमै सही मानिन्छ । पहिलो पटक शा, रीरीक स८ म्बन्ध राख्ने चाहानामा हुनुहुन्छ भने यी कुरामा विषेश ध्यान दिनुहोला ।
१. शा८ रीरीक स,म्बन्ध राख्नु अघि सबैभन्दा विषेश ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाई रो८ गको ख८ तरा र गर्भ नरहोस् भन्नका लागी क८ ण्डम प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
२. तपाईसँग शा८ रीरीक सम्बन्ध राख्ने पार्टनरको स्वास्थ्य कस्तो छ पहिले यसबारे चासो राख्नुहोस् । यसले तपाईको से८ क्स पार्टनरबाट सर्ने रो८ गको ख८ तराबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
३. शा८रीरीक स, म्बन्ध राख्नु अघि तपाई र पार्टनर बिचको सम्बन्ध प्रेम हो वा यौ८ न इच्छा पूरा गर्ने मात्र हो त्यसबारे आफू जानकार हुनुहोस् ।
४. तपाईले शा८ रीरीक स, म्बन्ध राख्दै गर्दा पी८ डावोध हुनुहुँदैन ।
५. यदि तपाई पार्टनरलाई खुशी पार्नका लागी मात्र शा८ रीरीक सम्बन्धका लागी राजी हुनुभएको हो भने यसले तपाई मा८ नसिक असर देखापर्छ । त्यसैले सकेसम्म आफू पुर्ण तयारी नभई यौ८ न प्रस्ताव नस्विकार्नु होस् । बीबीसीबाट
Next भाइरल बन्यो : कालीगण्डकी माथि बनाएको यो पिङ, – दैनिक ९० हजारसम्म कमाइ